အထီးကျန်နေတဲ့စိတ်ကို ဘယ်လိုဖြေဖျောက်ကြမလဲ… – Trend.com.mm
Posted on February 19, 2019 by Noel
ဘေးနားမှာသူငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိနေလည်းစိတ်က အထီးကျန်နေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။သူတို့ပျော်ပေမဲ့ ကိုယ်က
လိုက်မပျော်နိုင်ပဲ စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုကိုစိုးရိမ်နေသလိုမျိုး၊ကိုယ်ပျော်လိုက်ရင်များ တစ်ခုခုဖြစ်သွားမလားဆိုတာမျိုး ၊သူငယ်ချင်းတွေနဲ့
အတူရှိနေရင်တောင် သူတို့က ကိုယ့်အပေါ်တကယ်ခင်ရဲ့လားဆိုတဲ့ စတဲ့အတွေးတွေမျိုးစုံနဲ့ လူက အပေါင်းအသင်းကြားထဲရှိနေပေမဲ့
စိတ်က အထီးကျန်နေတတ်ပါတယ်။ဒါဆို အဲ့ဒီစိတ်ကို ဘယ်လိုဖြေဖျောက်ကြမလဲ?
တကယ့်တော့ ဖြေဖျောက်တဲ့နည်းလမ်းက ထူးထူးခြားခြားတော့မရှိပါဘူး။သင့်စိတ်လေးကိုပြောင်းလဲလိုက်ရုံပါပဲ။
စိတ်ထဲမှာ ကိုယ်က တကယ်ပဲအချစ်ခံရဖို့ထိုက်တန်ရဲ့လားဆိုတာမျိုးမတွေးပါနဲ့။သင်အချစ်ခံရလို့သာ သင့်အပေါင်းအသင်းတွေကြားထဲ
အမြဲရှိနေတာပါ။ကိုယ်က အလေးထားရသလောက် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ၊ကိုယ့်မိသားစုတွေဆီက ပြန်အလေးထားမခံရဘူးဆိုတာမျိုးလည်း
နောက်တစ်ခုက စိတ်ထားတတ်အောင်ကြိုးစားပါ။ကိုယ်ချစ်သလောက် သူက ဘာလို့ပြန်မချစ်တာလဲ၊ကိုယ်ဂရုစိုက်ပေးနိုင်သလောက်
ဘာလို့ဂရုစိုက်မခံရတာလဲ စတဲ့အတွေးတွေဟာ ပူလောင်လွန်းပါတယ်။မေတ္တာတရားဆိုတာ အသွားအပြန်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ ပြန်မရလည်း
ပေးရတာကိုပဲကျေနပ်နေတဲ့မေတ္တာမျိုးက သင့်ကိုပိုပြီးအေးချမ်းစေပါလိမ့်မယ်။ပြန်ရဖို့ကိုတောင့်တနေတာထက် ကိုယ့်ဘက်က အမြဲတမ်းစေတနာမှန်၊
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရှိနေချိန် ငါချစ်သလောက်မချစ်ကြဘူး။ငါ့ကိုဂရုမစိုက်ကြဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဝင်လာတဲ့အခါ အဲ့ဒီအတွေးကို
ဖျောက်ပြီး လက်ရှိအချိန်ကို အာရုံစိုက်ကြည့်ပါ။သူတို့သင့်အပေါ်ဂရုစိုက်တာ၊ချစ်တာကို သင်သတိမထားမိတာကြောင့်အထီးကျန်တဲ့စိတ်
ခံစားရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘယ်သူမှ ကိုယ်သဘောမကျတဲ့သူ၊ကိုယ်မချစ်တဲ့သူကို သူငယ်ချင်းဘော်ဒါကဏ္ဏ မထားပါဘူး။
သင်က အချစ်ခံရဖို့ထိုက်တန်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ဒါကြောင့် တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အတွေးကိုဖျောက်လို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသေချာမြင်အောင် အသေးအဖွဲလေးတွေကအစ ဂရုစိုက်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။တစ်ချို့အရာတွေက လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ မမြင်ရတတ်ပါဘူး။အထူးသဖြင့် ချစ်ြခင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပေါ့။
ဘေးနားမှာသူငယျခငျြးတှအေမြားကွီးရှိနလေညျးစိတျက အထီးကနျြနတောမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။သူတို့ပြျောပမေဲ့ ကိုယျက
လိုကျမပြျောနိုငျပဲ စိတျထဲမှာတဈခုခုကိုစိုးရိမျနသေလိုမြိုး၊ကိုယျပြျောလိုကျရငျမြား တဈခုခုဖွဈသှားမလားဆိုတာမြိုး ၊သူငယျခငျြးတှနေဲ့
အတူရှိနရေငျတောငျ သူတို့က ကိုယျ့အပျေါတကယျခငျရဲ့လားဆိုတဲ့ စတဲ့အတှေးတှမြေိုးစုံနဲ့ လူက အပေါငျးအသငျးကွားထဲရှိနပေမေဲ့
စိတျက အထီးကနျြနတေတျပါတယျ။ဒါဆို အဲ့ဒီစိတျကို ဘယျလိုဖွဖြေောကျကွမလဲ?
တကယျ့တော့ ဖွဖြေောကျတဲ့နညျးလမျးက ထူးထူးခွားခွားတော့မရှိပါဘူး။သငျ့စိတျလေးကိုပွောငျးလဲလိုကျရုံပါပဲ။
စိတျထဲမှာ ကိုယျက တကယျပဲအခဈြခံရဖို့ထိုကျတနျရဲ့လားဆိုတာမြိုးမတှေးပါနဲ့။သငျအခဈြခံရလို့သာ သငျ့အပေါငျးအသငျးတှကွေားထဲ
အမွဲရှိနတောပါ။ကိုယျက အလေးထားရသလောကျ ကိုယျ့သူငယျခငျြးတှေ၊ကိုယျ့မိသားစုတှဆေီက ပွနျအလေးထားမခံရဘူးဆိုတာမြိုးလညျး
နောကျတဈခုက စိတျထားတတျအောငျကွိုးစားပါ။ကိုယျခဈြသလောကျ သူက ဘာလို့ပွနျမခဈြတာလဲ၊ကိုယျဂရုစိုကျပေးနိုငျသလောကျ
ဘာလို့ဂရုစိုကျမခံရတာလဲ စတဲ့အတှေးတှဟော ပူလောငျလှနျးပါတယျ။မတ်ေတာတရားဆိုတာ အသှားအပွနျရှိတယျဆိုပမေဲ့ ပွနျမရလညျး
ပေးရတာကိုပဲကနြေပျနတေဲ့မတ်ေတာမြိုးက သငျ့ကိုပိုပွီးအေးခမျြးစပေါလိမျ့မယျ။ပွနျရဖို့ကိုတောငျ့တနတောထကျ ကိုယျ့ဘကျက အမွဲတမျးစတေနာမှနျ၊
သူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူရှိနခြေိနျ ငါခဈြသလောကျမခဈြကွဘူး။ငါ့ကိုဂရုမစိုကျကွဘူးဆိုတဲ့အတှေးမြိုးဝငျလာတဲ့အခါ အဲ့ဒီအတှေးကို
ဖြောကျပွီး လကျရှိအခြိနျကို အာရုံစိုကျကွညျ့ပါ။သူတို့သငျ့အပျေါဂရုစိုကျတာ၊ခဈြတာကို သငျသတိမထားမိတာကွောငျ့အထီးကနျြတဲ့စိတျ
ခံစားရတာဖွဈပါလိမျ့မယျ။ဘယျသူမှ ကိုယျသဘောမကတြဲ့သူ၊ကိုယျမခဈြတဲ့သူကို သူငယျခငျြးဘျောဒါကဏ်ဏ မထားပါဘူး။
သငျက အခဈြခံရဖို့ထိုကျတနျတဲ့သူတဈယောကျပါ။ဒါကွောငျ့ တဈယောကျတညျးဖွဈနတေယျဆိုတဲ့စိတျအတှေးကိုဖြောကျလို့ ပတျဝနျးကငျြကိုသခြောမွငျအောငျ အသေးအဖှဲလေးတှကေအစ ဂရုစိုကျကွညျ့ဖို့လိုပါတယျ။တဈခြို့အရာတှကေ လှယျလှယျကူကူနဲ့ မမွငျရတတျပါဘူး။အထူးသဖွငျ့ ခြွဈခငျးမတ်ေတာနဲ့ပတျသကျလာရငျပေါ့။
လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ သင့်အလုပ်မှာ တကယ်ရောပျော်ရဲ့ လား